Pep Guardiola oo weerar ku ah Bayern Munich… (Yuu ka doonayaa?) – Gool FM
(Manchester) 11 Maaajo 2020. Macallinka kooxda Manchester City ee Pep Guardiola ayaa baadi goob ugu jira saxiixyo cusub oo dhanka difaaca ah, waxaana markan bartilmaameed uu ka dhiganayaa difaaca kooxda Bayern Munich ee Alphonso Davies kaddib markii saaxiibbada uu ku leeyahay kooxdaas ay uga soo warrameen tayada wiilkan dhallinyarada ah.
Booska difaaca bidix ee kooxda Manchester City ayaa ka mid ah boosaska u baahan dib u habeynta, iyadoo baddel sax ah aanan loo hayn Benjamin Mendy kaasoo ay dhaawacyadu daris la yihiin tan iyo soo caga dhigashadiisii Etihad.
Sida laga soo xiganayo Daily Mirror, City macallinkeeda Guardiola ayaa isha la raacaya 19-ka jirka difaaca bidix kaga ciyaara kooxda Bayern, tii oo ay jirto in wiilka reer Canada uu ku habboon yahay falsafadda Guardiola, maadaama difaacyada garbaha ay udub dhexaad u yihiin guulihiisa.
Si kastaba ha ahaatee, City ayaa loollan adag kala kulmeysa kooxda ay xiflaatamaan ee Manchester United kaasoo ku aaddan saxiixa Davies, maaddaama Red Devils iyaduna ay xiiseyneyso saxiixa difaacan.
Sergio Ramos iyo Gerard Pique oo ku kala aragti duwan xilliga dib u ciyaarista horyaalka La Liga